Indlela yokufumana iivenkile ezibalaseleyo ukuba zilisebenzise eli phephancwadi ye-imeyile evela kwi pa parlour
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Indlela yokufumana iivenkile ezibalaseleyo ukuba zilisebenzise eli phephancwadi ye-imeyile evela kwi pa parlour
Wonke evela nesendlu pa, ulwazi ishishini zeziganeko kunye mini, ndicinga ukuba abanye abantu baye ngeposi. Ngokuba yonke imihla ukufikelela nantoni emails, ndikhe ndeva ukuba abantu abaninzi ezingekho ngenyameko kakhulu khangela. Noko ke, ukuba iintlungu bafumana imeyile, ulwazi olufunayo nto igcinwe esandleni ilahleko.
Ngoko ke, sisithi thaca indlela ukusetyenziswa kakuhle mail delivery. I-imeyile Ishishini, nesendlu pa, ufike ikhwele ukuba ndibeke ulwazi isiganeko kunye nolwazi Xintai usuku, okanye amandla. E-mail, nokuba ngaphandle kokuya kwi elibe fans, indlela apho bafumana ulwazi lwe evenkileni.
ukusetyenziswa ngobuchule indlela enjalo e-mail, funda izizathu ukuba uphume emntwini imeyile, apho kwenziwa iivenkile ukukhetha ngokufanelekileyo xa kuthelekiswa nezinye iivenkile. Kuqala kwinto zonke, wobeka phi na ulwazi lomcimbi, nokuba kuthe ezinyanzela kuvuliwe, ungenza ndiyaqonda yi imodeli msitho eyayisekwe.
umzekelo, njalo ukuba ngaba akukho umfuziselo kakhulu yayibaleka imifanekiso yemisitho, kwandisa amathuba Gase ejoliswe nokusebenza. Kwimeko iziganeko esiyikhuphayo onyanisekileyo, imodeli kunye nemiqondiso eziyimizekelo iqinisa, okanye kwaziswa imodeli msitho, kukho umkhwa ukuzama lokubhena intlawulo.
eyakhuthaza imeko kwiziganeko ezinjalo, uze uzame ukuba ukufunda ukusuka imeyile, kubonakala ngathi akukho mfuneko ukuya banciphe isiganeko, oko akuthethi ukuba kuba utyalo-mali eyilahleko. Ukongeza, kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba isiganeko enkulu, ngomhla kamva imicimbi, kukho ukuba lweposi lomxholo eziphambili ithunyelwe.
le e-mail, kuba yinkqubo ekuphulukenwe nalo ngokungqinelana siganeko, kukuba akukho imifuziselo Injongo ngokwaneleyo ukubeka ngomhla kwishishini e-mail. Kwiintsuku ezimbalwa A ngaphambi isibhengezo isiganeko sele accounted for ezininzi, ithi ekhuselekileyo kubhetele ukuba kungenela ugwayimbo.
Ke, ndicinga ukuba maxa wambi kukho kukuba imeyile unikelwa ukongeza kwixesha njengesiqhelo.
mail enjalo mgaqweni, phezulu-iseti ngaphandle kwesaziso ngaphambi Okanye wenza intetho kweqonga, okanye isaziso netafile isikhonkwane kamnandi, ekubeni kwiimeko ezininzi ulwazi injongo, kubhetele ukuba uqiniseke ukuba ukuhlola, ndicinga ukuba kuhle.
Noko ke, ukususela kwinqanaba umbono imeko yangoku ndiyivuselele ingqondo gembula, singakwazi swa ngamnye Ukucwangcisa saziso ukuthi saziso, ke kulindeleke kude kangakanani, oko ukuya evenkileni. Amalungu e-mail, zininzi Ukuba ubiza ulwazi elihle ngaphambili kunokuba abanye abathengi.
Xintai of ilotto kunye ilotto ixesha umahluko evulekileyo, wena okanye undazise phambi kokuba ukuba ixesha lushicilelwe. Ngenxa yoko, nkqu kwimeko eye wambetha kwezinye iivenkile, yinto inguqulelo okanye kubetha ukuma kakuhle kweemeko ezingezinye. Ukusuka
nesendlu ezahlukeneyo pa, ezinye abo bafumene i-imeyile, abanye abantu ezivenkileni ezahlukeneyo ukuba yi ixesha. Zisiwe ngexesha lenene, ezifana e-mail kwingxelo yobume, ndicinga ukuba ngobuchule kunokuthiwa ukuba abantu babanga ngubani bakwazi ukuthatha inzuzo.
ezinjalo, kusetyenziswa kakuhle kwingcaciso efunyenwe preferentially, xa kuthelekiswa iintlobo nesendlu pa, ndicinga ukuba ukuze bazame ukuya phantsi iivenkile ezinenjongo amaxesha ngamaxesha.